1 KỌRINT 15 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 15)
1 KỌRINT 15
Ụmụnna m, ugbu a achọrọ m ime ka unu cheta ozi ọma ahụ m ziri unu mgbe m buru ụzọ bịakwute unu, nke unu kweere na ya, na nke unu guzosikwara ike nꞌelu ya.
Na e liri ya, ma Chineke mere ka o si nꞌọnwụ bilie dị ndụ ọzọ nꞌụbọchị nke atọ, dị ka akwụkwọ nsọ kwukwara na ọ ga-eme.
Mgbe o si nꞌọnwụ bilie o gosiri Pita onwe ya, emesịa, ndị ozi iri na abụọ ahụ hụkwara ya.
Emesịakwa, o gosiri ihe karịrị narị mmadụ ise onwe ya nꞌotu oge. Ọtụtụ nꞌime ndị ahụ ka nọ ndụ taa, ọ bụ ezie na ụfọdụ nꞌime ha anwụọla.
Emesịa, Jemes hụrụ ya; o mekwara ka ndị ozi nile hụ ya.
Nꞌikpeazụ, mụ onwe m hụkwara ya, dị ka a ga-asị na m bụ nwa a na-amụghị nꞌoge.
Nꞌihi na ọ bụ m kachasị nta nꞌime ndị ozi Kraịst nile. O kwesịkwaghị rị ka a kpọọ m onyeozi ya nꞌihi na alụsoro m nzukọ Chineke ọgụ nke ukwuu.
Ma ihe dị mkpa abụghị na m rụrụ ọrụ karịa ha, ma ọ bụkwanụ na ha rụrụ ọrụ karịa m. Ihe dị mkpa bụ na anyị kwusaara unu ozi ọma, na unu kweere nꞌozi ọma ahụ anyị kwusaara unu.
Ma ebe unu kweere ihe anyị kwusara, na Kraịst si nꞌọnwụ bilie, gịnị mere ụfọdụ unu ji na-ekwu na ndị nwụrụ anwụ apụghị isi nꞌọnwụ bilie ọzọ.
Nꞌihi na ọ bụrụ eziokwu na a pụghị ime ka ndị nwụrụ anwụ si nꞌọnwụ bilie, nke a pụtara na e meghị ka Kraịst site nꞌọnwụ bilie.
Mgbe ahụ kwa, anyị bụ ndị ozi Kraịst na-aghagide Chineke ụgha, nꞌihi na anyị na-asị na o mere ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie, mgbe ndị nwụrụ anwụ na-apụghị ịdị ndụ ọzọ.
Nꞌihi na, ọ bụrụ na a pụghị ime ka ndị nwụrụ anwụ bilie dị ndụ ọzọ, Kraịst ebilikwaghị, nꞌihi na ọ nwụrụ anwụ.
Ọ bụrụ na ihe si otu a dị, ọ pụtakwara na ndị nile nwụrụ anwụ kweere na Kraịst alaala nꞌiyi.
Ọ bụrụkwa na olileanya anyị nꞌime Kraịst gwụrụ nanị na ndụ anyị nꞌime ụwa a, anyị bụ ndị e kwesịrị ka e meere ebere.
Ma eziokwu ahụ pụtara ìhè bụ na e mere ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie nꞌezie, ọ bụkwa onye mbụ nꞌetiti ndị nile nwụrụ nꞌime ya, ndị na-aghaghị isi nꞌọnwụ bilie nꞌotu ụbọchị.
Nꞌihi na dị ka ọnwụ si site nꞌaka otu nwoke rute anyị, otu a kwa ka mbilite nꞌọnwụ si site nꞌaka otu nwoke rute anyị.
Dị ka mmadụ nile si nwụọ nꞌihi na ha si nꞌAdam pụta, otu a kwa ka mmadụ nile ga-esi site nꞌọnwụ bilie nꞌihi njikọta e jikọtara ha na Kraịst.
Onye ọ bụla ga-ebili mgbe oge ya ruru, ma Kraịst eburula ụzọ bilie. Mgbe ọ lọghachiri, ndị nile bụ nke ya ga-ebili dịkwa ndụ ọzọ.
Mgbe nke a gasịrị, ọgwụgwụ ihe nile ga-abịa, mgbe Kraịst ga-enyefe alaeze nꞌaka Chineke bụ Nna, nꞌihi na o meriela ndị ọchịchị nile, ndị isi nile na ndị iro nile.
Nꞌihi na Kraịst ga-abụ eze tutuu ruo mgbe ọ lụgburu ndị iro ya nile, doo ha nꞌokpuru ụkwụ ya.
Ee, Kraịst ga-abụ eze tutuu ruo mgbe o meriri onye iro nke ikpeazụ bụ ọnwụ.
Nꞌihi na akwụkwọ nsọ ekwuola sị, “Chineke edoola ihe nile nꞌokpuru ọchịchị Kraịst.” Ma “Ihe nile” a apụtaghị na Chineke so, nꞌihi na ọ bụ ya na-edo “Ihe nile” nꞌokpuru Kraịst.
Mgbe e mere ka ihe nile dịrị nꞌokpuru ọchịchị Kraịst, Kraịst nꞌonwe ya ga-edo onwe ya nꞌokpuru Chineke, ka Chineke onye nyere Kraịst ike, bụrụ onye na-achị ihe nile.
Gịnị mere anyị ji na-adọgbu onwe anyị nꞌọrụ kwa ụbọchị? Gịnị mere anyị na ọnwụ ji na-agba mgba mgbe nile?
Nꞌihi na ọ bụ eziokwu na m na-ahụ ọnwụ anya kwa ụbọchị dị ka o si bụrụ eziokwu na ana m eji ito eto unu nꞌime Kraịst anya isi.
Ma mmadụ pụrụ ịjụ ajụjụ sị, “Olee otu a ga-esi mee ka onye nwụrụ anwụ bilie? Olee ụdị ahụ ọ ga-enwe mgbe o si nꞌọnwụ bilie?”
Onye nzuzu! Ọ̀ bụ na ị maghị na mkpụrụ ọka i tinyere nꞌala ga-epu nanị ma ọ bụrụ na o buru ụzọ nwụọ?
Mgbe o bidokwara ipu, ahihia ndụ nke na-apụta na-adịkwa iche site na mkpụrụ ahụ ị kụrụ. Nꞌihi na mkpụrụ ahụ i tinyere nꞌime ala bụ nanị mkpụrụ kpọrọ nkụ.
Ọ bụ Chineke na-enye mkpụrụ ahụ ụdị ahụ ọ chọrọ dị ka o si masị ya. Chineke na-enye mkpụrụ ọ bụla ahụ nke kwesịrị ya.
Dị ka e si nwee mkpụrụ dị iche iche, otu a ka e si nwee anụ ahụ dị iche iche. Mmadụ nwere anụ ahụ dị iche, anụ ọhia nwere ụdị anụ ahụ nke ha. Nnụnụ nwere anụ ahụ ha, azụ nwekwara nke ha.
Ịma mma na ebube nke anyanwụ dị iche, ọnwa nwekwara nke pụrụ iche. Otu a kwa, kpakpando nwekwara ịma mma pụrụ iche. Ma ụfọdụ kpakpando na-enwu ọcha karịa kpakpando ndị ọzọ.
Otu a ka mbilite nꞌọnwụ ga-adị. Mgbe e liri anụ ahụ anyị, ihe nwụrụ anwụ na nke pụrụ ire ure ka ọ bụ, ma mgbe e mere ka o si nꞌọnwụ bilie, ọ gaghị anwụkwa ọzọ.
Anụ ahụ nke anyị nwere ugbu a, bụ nke pụrụ ịrịa ọrịa na nke pụrụ ịnwụ anwụ. Ma mgbe e mere ka anyị dịrị ndụ ọzọ, a ga-eme ka o bilie nꞌotuto. Ee, ha bụ anụ ahụ na-adịghị ike ugbu a, ma mgbe anyị biliri ọzọ, a ga-eme ka ọ bụrụ anụ ahụ nwere ike.
Dị ka anyị nile si nwee anụ ahụ yiri nke Adam, nke si nꞌịta, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi nwee anụ ahụ ga-adị ka nke Kraịst onye si nꞌigwe.
Ihe m na-agwa unu ụmụnna m, bụ na ihe ọ bụla nke nwere anụ ahụ na ọbara enweghị ike iketa alaeze Chineke. Nꞌihi na anụ ahụ anyị a, nke na-anwụ anwụ, abụghị ụdị anụ ahụ na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ma geenụ ntị ka m gwa unu ihe nzuzo a! Ọ bụghị anyị nile na-aga ịnwụ, kama, a ga-enye anyị anụ ahụ ọhụrụ nke pụrụ iche.
Ihe ndị a ga-emezu na mberede, nꞌotu ntabi anya, mgbe opi ike ahụ dara. Nꞌihi na a ga-esi nꞌelu fụọ opi ike ahụ, nke ga-eme ka ndị nile nwụrụ anwụ nꞌime Kraịst si nꞌọnwụ jiri anụ ahụ ọhụrụ bilie. Mgbe ahụ a ga-agbanwekwa anyị bụ ndị dị ndụ nye anyị anụ ahụ ọhụrụ.
Nꞌihi na a ghaghị ịgbanwe anụ ahụ anyị a, nke na-anwụ anwụ, nyekwa anyị ahụ nke na-agaghị anwụ ọzọ.
1 KỌRINT 15:1
1 KỌRINT 15:4
1 KỌRINT 15:5
1 KỌRINT 15:6
1 KỌRINT 15:7
1 KỌRINT 15:8
1 KỌRINT 15:9
1 KỌRINT 15:11
1 KỌRINT 15:12
1 KỌRINT 15:13
1 KỌRINT 15:15
1 KỌRINT 15:16
1 KỌRINT 15:18
1 KỌRINT 15:20
1 KỌRINT 15:21
1 KỌRINT 15:22
1 KỌRINT 15:23
1 KỌRINT 15:24
1 KỌRINT 15:25
1 KỌRINT 15:26
1 KỌRINT 15:27
1 KỌRINT 15:28
1 KỌRINT 15:30
1 KỌRINT 15:31
1 KỌRINT 15:35
1 KỌRINT 15:36
1 KỌRINT 15:37
1 KỌRINT 15:38
1 KỌRINT 15:39
1 KỌRINT 15:41
1 KỌRINT 15:42
1 KỌRINT 15:43
1 KỌRINT 15:49
1 KỌRINT 15:50
1 KỌRINT 15:51
1 KỌRINT 15:52
1 KỌRINT 15:53